Viognier - Amagilebhisi - Iningizimu Afrika
I-Viognier iyinhlobonhlobo yewayini elimhlophe, elihlotshaniswa nezofuzo ezihlobene nomvini wasePiedmontese, u-Freisa. Igama lisuselwa egameni lesiCeltic vidu, elisho izinkuni.
Izinhlobonhlobo zitholakala eDalmatia - eyaziwa njengeCroatia namhlanje - kusukela lapho uMbusi waseRoma uMarcus Aurelius Equitius Probus, okusolakala ukuthi, wayiyisa eFrance cishe ngo-280 AD.
Izinhlobonhlobo zazihlukunyezwe yi-phylloxera, eyayiqeda izivini zaseYurophu ngasekupheleni kwe-19th Century futhi zaphela zaphela. Eminyakeni yama-1980, ukuhlwanyela esiGodini saseRhone, ngaleso sikhathi okwakungaba cishe wonke ama-Viognier asetshenziselwa ukutshala emhlabeni, wenqaba ukuya kumahektha angu-20 kuphela.
Ukuthandwa kwewayini kuye kwanda kusukela ngaleso sikhathi nanamuhla, iViognier itshalwe ezindaweni eziningi zokukhiqiza iwayini zomhlaba.
Igama loqobo lalinguVugava Bijela futhi liyaziwa nangokuthi uPitit Vionnier noVonnier.
UCharles Emuva kwe-Fairview ePaarl kwakuyisandla sokushayela ekusungulweni kweViognier eNingizimu Afrika. Izinto zokuqala zezitshalo zangeniswa eNingizimu Afrika ngo-1989 futhi emuva kwaba umkhiqizi wokuqala wokutshala nokukhulula iwayini le-Viognier elibhalwe ngawo-1990.
I-Viognier namanje ibonisa ingxenye encane yenani eliphelele ngaphansi kokukhiqizwa kwamagilebhisi e-South Africa. Lezi zinhlobonhlobo ziye zatshalwe kuzo zonke izifunda ezikhiqiza iwayini zezwe, kanye nokubalwa kwePaarl endaweni enkulu ngaphansi kokukhiqizwa, kulandelwa iSwartland neStellenbosch.
Ngenkathi izimila ezihlukahlukene ngaphansi kwezimo zezulu ezifudumayo, ama-flavour ewayini amaningi ayenziwa lapho ekhishwa ngaphansi kwezimo ezipholile, isibonelo emahlathini aseningizimu asezingeni eliphakeme noma lapho etshalwe ezindaweni ezitholakale eziphefumulweni zasehlobo ezipholile.
Izinhlobonhlobo umlimi olinganiselayo, onokulinganisela kokuvuna okungaba ngu-6 t / ha kuya ku-8 t / ha.
Ivuthwa ekuqaleni, kusukela ekupheleni kukaJanuwari kuya kwengxenye yesibili kaFebhuwari.
Amajikijolo amhlophe aphuzi athola uboya obomvu obuphuzi uma uvuthiwe ngokugcwele. Amajikijolo amancane, ama-oval afakwe izikhumba ezincane. Inyama ine-ukunambitheka okunamnandi kakhulu.
Amaqabunga aphakathi, ajikeleze futhi ane-lobes amathathu kuya kwemihlanu.
Imivini kufanele iqhutshwe ukuze igweme ukulimala kwelanga futhi iqinisekise ukungena okuhle ekukhanyeni. Izinhlobonhlobo zizwela phansi kwe-downy isikhutha futhi zingase zithuthukise i-botrytis uma itshalwe emhlabathini ovundile kakhulu.
Kuthengiswa njengewayini elilodwa le-varietal noma lihlanganiswe nezinye izinhlobo ezibomvu noma ezimhlophe, njenge-Chardonnay noma iShiraz.
Ama-clones aseNingizimu Afrika ahlotshaniswa nezimbali ze-orange, amaphisile, izithelo ezishisayo, uju kanye nezinongo ezingavamile.